Ividiyo: Social Media Revolution 3 | Martech Zone
NgoLwesithathu, July 13, 2011 NgoLwesine, ngo-Okthoba 27, 2011 Douglas Karr
Ngasizathu simbe, angikhathali ukubuka lawa mavidiyo amangalisayo avela kuwo I-Socialnomics. Le nguqulo yakamuva yevidiyo yeSocialnomics yashicilelwa ngoJuni, 2011. ISocialnomics yasungulwa ngu-Erik Qualman ngenhloso yokuhlinzeka ngeSocial & Mobile Statistics, Studies & Surprises. Qiniseka ukuthi ubheka ibhulogi ka-Erik. Ngiyethemba ukumthola ku- Umbukiso Wezokumaketha ngolunye usuku!
Ngikuthokozele ... yize, njengoba kuphawulile okukodwa, bashaye ihlazo i-Star Wars trilogy ngokupela kahle uDarth Vader.
Ukuvuselelwa kwe-Gmail… Kungcono kakhulu ukwedlula isikhathi